Shirka Madasha Wada Tashiga Qaran oo ka furmay magaalada Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirka Madasha Wada Tashiga Qaran oo ka furmay magaalada Kismaayo
MAREEG 14 January 2016
Waxaa maanta si rasmi ah Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose uga furmay shirka Madasha wadatashiga Higsiga.
Shirka oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada dalka.
Shirar kala duwan oo gaar gaar ah ayey Masuuliyiintu leeyihiin ee ay uga hadlayaan hanaanka ugu haboon ee loo wajahayo nuuca doorasho ee 2016.
Axmed Madoobe ayaa xusay in ay muhiim tahay in calamada badan ee maamul goboleedyada hoos loo dhigo isla markaana calanka ay Soomaliya ku mideysan tahay sare loo qaado. Madaxweynaha Maamul goboleedka Jubba Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu taariiq ku reebo magaalada Kismaayo maanta.
Qudbada madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda socota wixii ku soo kordha kala soco